Maxaa ka soo baxay kulankii Farmaajo iyo xubnaha beesha Habargedir ee ku jira DFS - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Maxaa ka soo baxay kulankii Farmaajo iyo xubnaha beesha Habargedir ee ku...
Maxaa ka soo baxay kulankii Farmaajo iyo xubnaha beesha Habargedir ee ku jira DFS
Madaxweyne Farmaajo ayaa xalay xili danbe oo ku beegnayd kowdii subaxnimo kulan isugu yeeray xubnaha beesha Habargedir ugu jira dowlada Fedaraalka. Kulankaas ayaa la xiriira qorshaha Farmaajo ka leeyahay degaanka Galmudug iyo sidii uu u xaqiijin lahaa in uu ku gaaro qorshahiisa.
Xildhibanada iyo Wasiirada soo xaadiray ayaa ahaa kuwa qayb ka ah dowlada ha noqdaan qaar lacag laaluush joogta ah ka qaata dowlada Fedaraalka ama kuwo xilal ka haya dowlada. Farmaajo ayaa si aan ka leex leexasho lahaynin ugu sheegay beesha Habargedir in ay si buuxda u taageeraan qorshahiisa.
Farmaajo oo u muuqda mid ka soo horjeeda qorshaha gaarka ah ee uu Xasan Kheyre ka soo sameeystay Galmudug ayaa si dadban oo farsamaysan u cadeeyay in go’aanka lagu dhisaayo dowlad goboleedka Galmudug noqon doono mid uu isagu hogaamiyo, wixii hada ka danbeeyana isaga kaliya ay kala xiriiri doonaan.
Hadalka ka soo yeeray Farmaajo ayaa muujinya in uu hada hurdada ka soo toosay oo uu arkayo qorshaha lidka ku ah danahiisa ee uu Xasan Kheyre sameeystay kaas oo Kheyre ku doonayo in Madaxweyne uu u noqdo Axmad Qoor Qoor halka Gudoomiye Baarlamaana uu u rabo in uu ka dhigto Xuseen Iidow oo ay isku qoys ka soo wada jeedaan.
Beesha Habargedir oo ahayd mid lagu yaqiinay hogaan iyo qobweyne ayaa ku soo dhaamatay in ay u kala dhuuntaan Kheyre iyo Farmaajo ayaga oo aan marnaba ku heshiin karin in ay ka dhisaan deegaanka Galmudug Dowlad Goboleed ka tarjumaya danaha beelaha degan Galmudug.
Kheyre iyo Farmaajo ayaa horay ugu guulaystay; a) In ay kala diraan Ururka Al Sunna , b) Beeciyaan, meel cidla ahna soo dhagay Axmad Ducaale Xaaf, c) asbuucii hore waxaa lacag iyo jago lagu iibsaday Cabdi Qaybdiid oo hadda ku sugan dalka Tuyrkiga halkaas oo uu guri ku iibsanayo lacagtii farmaaji siiyay; d) waxaa fashil lagu sameeyay shirkii Hobyo oo ayan jirin cid meelmarin karta go’aanadii lagu soo gaaray e) Ganacasatii Beesha oo ay u horeeyaan Xuseen Goleey, Maxamed Deelaaf, Axmadnur Jimcaale iyo kuwo kale oo la aamusiyay f) Cabdikarin Guleed oo noqday aalad uu Fahad Yasin ku Shaqeeysto
Previous articleFarmaajo oo amray in Caleemasaar 3aad loo sameeyo Cumar Filish (Sababta ogoow)
Next articleSomalia Humanitarian Bulletin, 1 – 30 September 2019